IBirdie: Ucwaningo lweMakethe oluqhutshwa yi-AI | Martech Zone
IBirdie: Ucwaningo lweMakethe oluqhutshwa yi-AI
Idatha yomlilo enganikezwa yimithombo yezokuxhumana ayihlelwanga futhi kunzima ukuthola ulwazi olunengqondo kuyo ngaphandle kohlobo oluthile lobuhlakani. birdie kuguqula izigidi zamazwana, ukubuyekezwa, nezinye izingxoxo eziku-inthanethi zibe yimininingwane ehlelekile, esebenzayo yabathengi esiza amaqembu wokumaketha ukuthi enze izinqumo ezisheshayo nezisebenza kahle.
UBirdie uyipulatifomu yokuqala ebanzi ye-AI-based Insights-as-a-Service (IaaS) yomkhakha eyenzelwe ngqo ukusiza imikhiqizo ye-CPG efana ne-Samsung ne-P & G ukuqonda izigidi zemibono yabathengi, kuguqulwa idatha engahlelekile ibe yimininingwane engenzeka.
Ngokusebenzisa i-AI nokucubungula ulimi lwemvelo, Nansi ifayili le- ividiyo lokho kuchaza ukuthi unjani uBirdie ukuvuselela ucwaningo lwemakethe.
Kakade, imikhiqizo ehamba phambili yabathengi ku-CPG efana ne-Samsung ne-P & G isebenzisa ipulatifomu kaBirdie ukubikezela ukuthambekela kwesigaba, ukulindela izinkinga zomkhiqizo, nokuthola amathuba okuphromotha eziteshini ezinkulu zokuthengisa, inqubo ubhadane lwe-COVID-19 olusheshise njengoba imikhiqizo iphoqelelwa qamba iziteshi ezintsha zokuthengisa noma uqonde ukushintsha indlela yokuziphatha yabathengi eziteshini ezikhona
Isixazululo sikaBirdie sisiza izinkampani ukuthi ziqonde abathengi bazo 'isipiliyoni sokuthenga, sikhiqize Imininingwane yabathengi engasetshenziswa ezindaweni eziningi zenkampani yakho.
Imininingwane yabathengi - Zula ezigidini zemininingwane yabathengi kusuka emithonjeni eminingana esevele ihlelwe ngendlela eyenza ukubona into enkulu elandelayo bese kuguqula lokho kuqonda kube yisenzo esingenamsebenzi, okwenza kube lula ukufakazela i-ROI Yemininingwane Yabathengi. Imininingwane evela ku-Birdie itholwe ifike kuma-65% ngokushesha kunokucwaninga kwemakethe yendabuko.
Insizakalo yekhasimende - Qinisekisa futhi uqonde ukuthi amaqembu akho e-Customer Service asebenza kanjani ngokuqhathaniswa nabancintisana nabo abakhulu kanye nozakwethu abakhulu, futhi ufunde ukuthi i-Customer Experience ihlangana kanjani neziteshi ezahlukahlukene ngokuhlaziywa okususelwa ku-AI kwedatha yezwi-yomthengi. Ucwaningo lwe-Birdie lungahlanganisa i-100% yeziteshi nemiyalezo.
Ukumaketha nokuxhumana - Thola izethameli ezihlonziwe nemikhiqizo abayithandayo, izimfanelo zomkhiqizo, neziteshi zokwenza izinqumo zokuthenga. Hlola amandla akho nobuthakathaka bancintisana nabo ukuze wakhe imikhankaso eyenziwe ngezifiso yokuguqula amakhasimende amaningi. Izinkampani ezisebenzisa i-Birdie zithola ukuguqulwa okuphezulu okungu-3x kusuka kumikhankaso eyenziwe ngezifiso
Ukuqamba Nokuthuthukiswa Komkhiqizo - Thola ukufinyelela kulokho abathengi abakuthandayo nabangakuthandi mayelana nemininingwane ethile yakho - nemikhiqizo esincintisana nabo - kusukela ekupakisheni kuya ekunambithekeni. Funda ukuthi yini abacabanga ukuthi iyashoda emakethe bese uqalisa imikhiqizo ephumelelayo. Izinkampani zisebenzisa uBirdie ukusika isikhathi somjikelezo we-Innovation ngo-1/4.
Dedela Amandla we-AI bese udlulela ngaphesheya koCwaningo lweMakethe ukuze uthole idatha ejulile, eyimbudumbudu mayelana nokuthi abathengi bacabangani ngomkhiqizo wakho, imikhiqizo, izinsizakalo, kanye nabantu esincintisana nabo ukukhomba ngokushesha futhi basebenzise amathuba okukhula.
Funda kabanzi Ngezixazululo ze-Birdie
Tags: aibirdieukuqonda komthengiukuqambaimininingwane njengensizakaloucwaningo lwemakethezokuthuthukisa umkhiqizo